Hupfumi hweyera: chii icho, hunhu, mashandiro ayo uye mhando | Ehupfumi Zvemari
Fungidzira iwe uine zvikamu zvekambani. Uye izvo, kamwe kamwe, pachinzvimbo chekuve nekugadzirwa kwezvidimbu zana pazuva, une miriyoni. Zviripachena, sezvo iwe urikugadzira zvakawanda, izvo zvinhu zvinodhura zvichave zvakaderera, nekuti iwe unozotenga zvimwe. Asi kana zvasvika pakutengesa zvigadzirwa zvako, iwe uchazviita nemutengo mumwe chete. Uye nekutengesa zvimwe, iwe unowana mabhenefiti akakurisa pasi pemitengo yakaderera, unonzwisisa here? Zvakanaka, iwo muenzaniso watakakupa ndewe unouya kuzove hupfumi hweyero.
Kana iwe uchida dzidza zvakawanda nezve hupfumi hweyero, mhando dziripo, mashandiro azvo uye nezvimwe zvinhu zveupfumi hurongwa uhu, tobva tazotaura newe zvakadzama nezve zvese izvi.
1 Chii chinonzi hupfumi hweyero
1.1 Hupfumi hweyero kana hupfumi hwenzvimbo
2 Hunhu hwehupfumi hwechikero
4 Mhando dzehupfumi hwechiyero
4.1 Yemukati hupfumi hweyero
4.2 Hupfumi hwekunze
Chii chinonzi hupfumi hweyero
Hupfumi hweyero hunogona kutsanangurwa se mamiriro mune iyo kambani inowedzera kugadzirwa uye inoderedza mutengo. Mune mamwe mazwi, iri zano rinoedza kudzikisa mutengo uye mari kune yakanyanya uye, yeizvi, inowedzera mashandiro ekambani, ichigadzira kugadzirwa kukuru.
Zvino, zvinofanirwa kunzwisiswa kuti chaicho kubatsirwa kwekudzikiswa kwemutengo hakusi chete nekuti mbishi zvigadzirwa zvinotengwa zvakachipa nekuwedzera huwandu hwazvo, asi nekuti chinhu kana sosi yakatengwa inoshandiswa kuishandisa kusvika pazvakanyanya kugona.
Semuenzaniso, fungidzira kuti waita mari mumushini. Iyo nzira yekuisimbisa iyo nekukurumidza sezvinobvira ndeye kuburitsa yakawanda nayo. Paunowedzera kugadzira, unokurumidza kupedzisira wabhadhara muchina, uye mushure meizvozvo unotanga kuita purofiti 'yakachena'.
Hupfumi hweyero kana hupfumi hwenzvimbo
Wati wambonzwa nezve chiyero economics? Vazhinji vanofunga kuti mazwi ese ari maviri akafanana, asi chokwadi ndechekuti haana.
La hupfumi hwekuyera hunoreva akasiyana mitsara yekugadzira yekambani. Mune mamwe mazwi, idzi inzira dzakasiyana dzaungafanira kugadzira chigadzirwa. Kana imwe yeiyi mitsara yekugadzira isingashande, yakavharwa kana kuderedzwa kuti iwedzere kugadzirwa mune vamwe vanozivikanwa kuve vanobatsira.
Hunhu hwehupfumi hwechikero
Mushure mezvatakakuudza, tinogona kuona kuti hupfumi hweyero hunoratidzwa ne:
Kuderedzwa kweyuniti mutengo wezvigadzirwa. Mune mamwe mazwi, chidimbu chimwe nechimwe chinoitwa nekambani chine mutengo X. Kana kugadzirwa kukakwira, mutengo iwoyo unodzikira, nekuti kugadzirwa kuri kuwedzera, mutengo unodzikira.
Izvo zvinogona chete kuitwa mumakambani makuru, kunyanya kuti vanotarisana nemari hombe uye mabhenefiti avo haasi munguva pfupi, asi mune yepakati nepakati refu.
Natsiridza chibvumirano pakati pevanopa. Kunyangwe zvichinzi kudzikiswa kwemutengo wezvinhu kugadzira icho chigadzirwa hakukanganise, zvinodaro nekuti, nekuve nehuwandu hwehuwandu hwehuwandu, izvo zvinobvumidza vagadziri kudzikisa mutengo wezvinhu, nekudaro mutengo wechigadzirwa icho. zvichaderedzwa. Semuenzaniso, kana iyo mbishi ichida imwe euro, asi pachinzvimbo chezana iwe unotenga miriyoni, zvine musoro kufunga kuti mutengo uchadzikira, semuenzaniso kusvika gumi cents, kuchengetedza 100 cents pachikamu.
Pane chivimbo chakakura. Kuva nemakwikwi zvakanyanya (nekuti iwe haudi kuti zvigadzirwa zviwedzere uye neizvi unogona kushandira vatengi vako nekukurumidza), izvi zvichaita kuti varimari vakuonewo, uye kuti kana uchihodha zvigadzirwa, vanofunga nezvako kutanga nekuti uri Kurumidza.
Kunyangwe iwe uchinge watove uine zano rekuti hupfumi hweyero hunoshanda sei, hazvikuvadze kumira zvishoma panguva ino kuti utaure nezvazvo. Izvi zvinonyanya kubva pamitengo yakatarwa uye padanho rekugadzira. Chinangwa ndechekuderedza izvi zvakagadziriswa mutengo kusvika kune yakanyanya uye, kuti uite izvi, uwedzere mwero wekugadzira. Nekudaro, mhedzisiro inowanikwa ndeyekuti zvimwe zvigadzirwa zvinowanikwa, asi nemutengo wakaderera (zviripachena pasina kurasikirwa nemhando yezvinoitwa).
Ndicho yemakwikwi mukana uyo chete makambani makuru anokwanisa kuwana, kutamba nemutengo unoshanduka (mutengo wezvinhu zvakasvibirira kugadzira zvigadzirwa).
Kuti uite izvi, zvinofanirwa kutariswa kuti chinofanirwa kunge chiri chigadzirwa chinogona kutengeswa nekukasira, kana zvirinani kuti hachireve kuve neimba yekuchengetera izere nezvikamu izvo, chero nguva, zvinogona kudzikira kana "kubuda muchitaira. ". Neichi chikonzero, kana uchironga zano iri, zvinodikanwa kuti uzive mhedzisiro dzakasiyana dzeiyo yekuwedzera gadzira inogadzirwa.
Mhando dzehupfumi hwechiyero
Mukati mehupfumi hweyero iwe unofanirwa kufunga kuti hapana imwe chete, asi akati wandei mhando. Kunyanya, pane zvinotevera:
Yemukati hupfumi hweyero
Ndiwo unoitika mukati mekambani imwechete. Chaizvoizvo, ndiyo inozivikanwa zvakanyanya sezvo ino sisitimu ndiyo inoshandiswa nemakambani makuru, kana ayo ane kugadzirwa kwezvikamu kana zvinhu zvekupa zvikamu zvakasiyana, zvinozviita.
Kazhinji zano iri rinoitwa mukambani, kazhinji nguva dzese dzichitora matekinoroji matsva ekugadzira nechinangwa chekushandisa mari isingaite mukutsinhana nekugadzira kukuru.
Inozvarwa kuburikidza nekunze zvinhu, dzimwe nguva zvisina hukama nekambani pachayo, senge saizi yeindasitiri. Pakati pezvinhu zvinokanganisa nzvimbo, zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvetsika ...
Semuenzaniso, mukati mehupfumi hwekunze hweyero ingave iyo mitero iyo kambani inayo mune imwe nyika, kana nzira yekubhadhara mutero munyika iyoyo. Kana mune imwe yakachipa, uye pamwe nayo uchizoderedza mutengo, chinhu chakachengeteka ndechekuti iwe unofamba kwaunowana mabhenefiti akakurisa.
Zvino, izvi zvingave zviri kuzvitarisa kubva padivi "rakashata", sezvo paine zvekare (zvirinani kutaurirana zviwanikwa, mbishi zvigadzirwa, migwagwa yekuparadzira) zviri zvekunze zvinhu asi zvine chekuita nekambani.
Iye zvino zvaunenge uine nzwisiso iri nani yehupfumi hweyero, iwe unoziva nezve chero makuru makambani anozviita?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Hupfumi hweyero